Magacyada xildhibaanadii ka dambeeyey in Farmaajo ku darsado 2 sano (Aqriso) - Caasimada Online
Home Warar Magacyada xildhibaanadii ka dambeeyey in Farmaajo ku darsado 2 sano (Aqriso)
Magacyada xildhibaanadii ka dambeeyey in Farmaajo ku darsado 2 sano (Aqriso)
Muqdisho (Caasimada Online) – Golaha Shacabka ee waqtigoodu dhammaaday ayaa fadhi uu yeeshay 12-kii bishan waxaa uu Farmaajo ugu daray laba sano taasi oo kahor yimaadeen Aqalka Sare, maamul goboleedyada, Madasha Badbaado Qaran, bulshada rayidka iyo xataa beesha caalamka oo ay ugu horeeyaan Yurub iyo Mareykanka.
Waxaa hadda la helay liiska Xildhibaannada keenay isla markaana saxiixay mooshinka jiheynta doorashada. Liiska la helay ayaa wuxuu muujinayo tirada guud ee Mooshinka saxiixday, Inta haweenka ah, inta wadata dhalasho kale iyo maamul Goboleedyada ay kasoo jeedaan, waana sidan:
1- Tiro ahaan waa 41 keliya.
2- Liiska inta saxiixday 50% waa haween oo ku tuseysa in Farmaajo u adeegsaday dumarka oo ah kuwa looga tiro badan yahay aqalka.
3- Xildhibaannada 18% waxay heystaan baasaboorrada Mareykanka iyo Yurub oo laga yaabo iney cunaqabateyn wajahaan.
4 – Marka maamul goboleed ahaan loo fiiriyo Xildhibaannada mooshinka keenay waa sida: